Saldhig koronto-dhal: sifooyinka, isticmaalka iyo faa'iidooyinka | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Dunida tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxaa jira qaar si fiican loo yaqaan sida tamarta qorraxda iyo tamarta dabaysha iyo kuwa kale oo aan loo aqoon sida tamarta badda. Waa nooc ka mid ah tamarta dib loo cusboonaysiin karo oo ka faa'iidaysanaysa hirarka badda. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay a Saldhig koronto taas oo ah meesha isbedelka tamarta kinetic ee hirarka tamarta korantada ay ka dhacdo.
Maqaalkani waxa aanu kuu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato oo ku saabsan saldhigga tamarta tidal, sifooyinka iyo shaqadeeda.
1 Tamarta daadka
2 Saldhig koronto
2.1 Soosaarayaasha hadda socda
2.3 Tamarta qulqulka
4 Hawlgalka warshadda korantada
Baddu waxay leedahay awood tamareed oo aad u wayn, taasoo loo rogi karo koronto iyadoo loo marayo tignoolajiyada kala duwan. Waxaa ka mid ah ilaha tamarta badda sida uu qeexay Machadka Kala-duwanaanshaha Tamarta iyo Badbaadinta (IDAE), waxaan ka helnaa noocyo kala duwan:
Tamarta ka imanaysa qulqulka badda: Waxay ka kooban tahay ka faa'iidaysiga tamarta kinetic ee qulqulka badda si loo dhaliyo koronto.
Tamarta hirarka ama tamarta hirarka: Waa isticmaalka tamarta farsamada ee hirarka.
kulaylka qulqulka: Waxay ku salaysan tahay ka faa'iidaysiga farqiga heerkulka u dhexeeya biyaha dusha sare iyo badda. Isbeddelka kulaylka waxaa loo isticmaalaa koronto.
Tamar dabeylo ama tamar baraf: Waxay ku salaysan tahay isticmaalka mowjadaha, qulqulka iyo qulqulka biyaha badda, oo ay soo saaraan ficilka cufisjiid ee qorraxda iyo dayaxa. Haddaba, tamarta suurtagalka ah ee mowjadaha ayaa loo beddelaa tamar koronto iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa marawaxadaha, sida dhirta tamarta korontada.
Tamarta tamartu waa ilo tamareed beddelaad ah oo ku salaysan ka faa'iidaysiga qulqulka iyo qulqulka biyaha badda, kaas oo ay abuuraan jiidashada qorraxda iyo dayaxa. Sidan oo kale, waa dhacdo dabiici ah oo la saadaalin karo oo noo ogolaanaysa inaan sii ogaano marka dhaqdhaqaaqan biyuhu awood u yeelan doono in loo beddelo koronto.
Saldhigga korantada barafku waa midda mashiinada ku habboon laga helo si ay tamarta kinetic ee hirarku u beddelaan tamar koronto. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu heli karo tamarta biyaha. Waxaan arki doonaa mid kasta oo iyaga ka mid ah iyo dhinacyada ugu muhiimsan:
Soosaarayaasha hadda socda
Sidoo kale loo yaqaan TSG (Tidal Stream Generators), koronto-dhaliyeyaashani waxay isticmaalaan dhaqdhaqaaqa biyaha si ay tamarta dhaqdhaqaaqa ugu beddelaan koronto. Tani waa habka ugu caansan. Habkan tamarta lagu helo waxay ku lug leedahay qiimo hoose iyo saameyn deegaan hoose marka loo eego hababka kale.
Biyo-xireennadani waxay ka faa'iidaystaan ​​tamarta biyaha ee suurtogalka ah ee ka jirta inta u dhaxaysa sinnaan la'aanta u dhexeeya hirarka sare iyo kuwa hooseeya. Waa caqabado leh marawaxadaha, oo aad ugu eg biyo-xireenno-dhaqameedka, oo laga dhisay albaabka gacanka ama harada. Kharashku waa sarreeyaa, faa'iidaduna ma sarayso. Yaraanta meelaha aduunka ee buuxiya shuruudaha lagu martigelinayo iyo saamaynta deegaanku waa laba cilladood oo waaweyn.
Farsamadu waxay ku jirtaa marxaladda aragtida. Sidoo kale loo yaqaan DTP (Dynamic Tidal Power), waxay isku daraysaa labada hore, iyada oo ka faa'iidaysanaysa isdhexgalka ka dhexeeya tamarta kinetic iyo tamarta socodka qulqulka. Habkani wuxuu ka kooban yahay nidaam biyo-xireenno waaweyn ah oo keena wejiyo kala duwan oo biyaha ah si ay u dhaqaajiyaan marawaxadaha tamarta dhalinaya.
Waxaan ku nuuxnuuxsanaynaa in tamarta beddelka ah ay leedahay faa'iidooyin dhowr ah:
Waa il tamar nadiif ah oo aan soo saarin gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ama wasakh kale oo ka imanaysa ilaha tamarta kale.
Shidaal dheeri ah lama isticmaalo.
Koronto dhalin joogto ah oo la isku halayn karo.
Mawjadaha ayaa ah kuwo aan la koobi karin oo ay fududahay in la saadaaliyo.
Waa ilo tamar la cusboonaysiin karo.
Inkasta oo ay jirto suurtogalnimada weyn, isticmaalka tamarta biyaha ayaa sidoo kale leh faa'iido darrooyin, oo ay ku jiraan:
Taas waxa lagu gaadhi karaa maalgelin dhaqaale oo la taaban karo. Waa qaali in la rakibo.
Waxay saameyn muuqaal iyo muuqaal weyn ku leedahay xeebta, iyadoo ah mid ka mid ah cilladaha ugu welwelka badan ee tamarta hirarka.
Awoodda qulqulka ma aha doorashada ugu fiican dhammaan aagagga juqraafiga. Sababtoo ah xadiga tamarta aan heli karno waxay ku xiran tahay heerka dhaqdhaqaaqa badda iyo xoogga hirarka.
Tamar dabaylaha Waxa loo isticmaalay in laga dhaliyo koronto ilaa 1960-kii. Dalka ugu horreeya waa Faransiiska, kaas oo warshadda korantada ee Lens ay wali shaqaynayso.
Waddamada hadda leh awoodda koronto-dhalintu waxay kala yihiin: Kuuriyada Koonfureed, oo ay ku xigto Faransiiska, Kanada, Boqortooyada Ingiriiska iyo Norway. Waqtigan xaadirka ah, tamarta barafku waxay ka dhigan tahay kaliya qayb yar oo ka mid ah wadarta tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee adduunka, laakiin suurtogalnimada ayaa ah mid weyn.
Hawlgalka warshadda korantada
Warshada korontadu waa meesha tamarta ay soo saaraan baddu ay u beddelaan koronto. Si looga faa'iidaysto, biyo-xireenno leh marawaxadaha ayaa laga dhisay qaybta hoose. guud ahaan afka webiga ama gacanka. Kaydka ka dhashay dhismaha biyo-xidheenka ayaa buuxinaya oo faaruqinaya dhaqdhaqaaq kasta oo mawjadaha iyo biyaha ay soo saarayaan, taas oo saamaxaysa in la bilaabo marawaxadaha korontada dhaliya.
Sidee bay tamar tamareed u beddelaan koronto? Si aad uga jawaabto su'aashan, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo mabaadi'da awoodda iyo tamarta tamarta ee korodhka caadiga ah iyo hoos u dhaca mawjadaha ay soo saaraan is-dhexgalka qorraxda iyo qorraxda. Kor u kaca biyaha waxaa loo yaqaan qulqulka, wakhtiga soo degiduna wuu ka gaaban yahay kii hore.
Farqiga u dhexeeya dhererka heerka badda iyo heerka kaydku waa aasaas, sidaa darteed, sida laga soo xigtay Machadka Kala-duwanaanshaha iyo Ilaalinta Tamarta (IDAE), waxay faa'iido u leedahay oo keliya meelaha xeebaha ah halkaasoo dhererka qulqulka sare iyo hoos u dhaco. waxay ku kala duwan yihiin in ka badan 5 mitir oo udub dhexaad u ah rakibidda sifooyinkan. Shuruudahan waxa kaliya oo lagu buuxin karaa meelo kooban oo dhulka ah. Warshadaha, korontadu waxay u beddeshaa marawaxadaha ama beddelkayaasha. Wareegga baalihiisa iyo wareegga biyaha laftiisa, tamarta korontada ayaa la soo saaraa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto saldhigga tamarta tidal iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta biyaha badda » Saldhig koronto